Umthetho Wokulawulwa Kwe-Cannabis kanye Nentela - Imithetho Yabantu Abadala Base-Illinois
Uyini umthetho weCannabis Regulation and tax Act?
I-Illinois iphasise umthetho weCannabis Regulation and tax Act ngoMeyi 31, 2019. Kutholakale uhlelo lokulawulwa kwe-cannabis kanye nentela efuna ukulungisa okungalungile kwempi yezidakamizwa e-Illinois. Kuyindlela elawulwa kakhulu yensangu esemthethweni ebeka imakethe yamabhizinisi amancane nokulingana kwezenhlalo.
i-cannabis ilawula futhi isenzo sentela
Simboza kafushane izigaba eziphambili, ezibizwa ngama-Articles, zomthetho weCannabis Regulation and tax Act. Nazi izindatshana esizothinta kuzo;
Isigaba 1: Isihloko esifushane, okutholwayo nezincazelo;
Isigaba 5: Igunya
Isigaba 7: Ukulingana Komphakathi
I-Article 10: Ukusetshenziswa komuntu siqu
Isigaba 15: Izinhlangano Ezihlawula Izidingo
Isigaba 20: Izikhungo Zokulima
Isigaba 25: Uhlelo lwe-Vocational Cannabis Pilot Programme for Community College
Isigaba 30: Abalimi Bobuciko
Isigaba 35: Izinhlangano Zabashokobezi
Isigaba 40: Izinhlangano Zokudlulisa
Isigaba 45: Ukugcizelela kanye nokulwa nobungozi
Isigaba 50: Labs & ukuhlolwa
Isigaba 55: Izinhlinzeko ezijwayelekile
Imibhalo 60 & 65: Intela Yobumfihlo Nezintela
Isigaba 900: Izichibiyelo
Isigaba 999: Okuxubile
I-Illinois Adult Ukusetshenziswa Okusha kweMarijuana (i-cannabis ene-0.3% THC) kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kudinga izingqinamba eziningi Ummeli webhizinisi onolwazi lwemboni ye-cannabis kungasiza ngempela ukukhula kwenkampani yakho ukuthi ikhule, i-infuser noma i-dispensary.
Imibhalo ye-Cannabis Regulation and Act Act e-Illinois
Ukusetshenziswa kwabantu abadala komthetho we-cannabis kudluliswe yisishayamthetho sase-Illinois, njengoba ubonile ukuthi leyo bekuyinkambiso yesikhathi eside ethatha sonke isikhathi sokulungiswa komthetho kusuka ngokuyisisekelo sokuqala konyaka kuze kube isikhathi esimisiwe ngoMeyi 31, 2019. Manje umbusi usayina inkokhiso - khona-ke inqubo yokwenza umthetho iyaqala. Kuzoba nesicelo esikhishwe ngu-Okthoba 2019. Sizoxoxa kabanzi ngaleyo vidiyo futhi siyithumele kuleso sihloko.
Umthetho weCannabis Regulation kanye noMthetho Wentela uhlukaniswe waba yizindatshana ezingama-999. Kodwa kwaqala ngomhlangano wokuqamba amagama ngaphambi kwazo zonke izichibiyelo okungenzeka ukuthi zihambe ngama-5s njengoba amakhokhthi evame ukwenza. Ake siqhubeke ngezindikimba ezahlukahlukene zomthetho:
Isigaba 1: Ukutholwa kwesihloko iDemo nezincazelo. Le yi-athikili ebaluleke kakhulu edala "imigomo yobuciko" emthethweni omusha wase-Illinois mayelana nokusetshenziswa kwabantu abadala kwe-cannabis, ikakhulukazi inguqulo enamaphesenti angaphezu kuka-0.3 we-THC.
Isigaba 5: Igunya - Ngokuyisisekelo ukhokhisa umnyango we-Ag ukuthi unwebise (manje usunaso sonke isitshalo) - I-Medical marijuana, i-hemp yezimboni & maduze ukusebenzisa insangu yabantu abadala.
Isigaba 7: Ukulingana Kwezenhlalo eCannabis - Umhlangano wokuqanjwa ngamaStrange - Izinhlelo Zokufakwa Komphakathi Zokulingana - Kakhulu kakhulu
Isigaba 10: Ukusetshenziswa komuntu siqu kweCannabis kungenza ngizibuze ukuthi ngabe ukulingana kwezenhlalo kufakiwe yini ngemuva kokukhokhiswa kokuqala - noma mhlawumbe bacabanga ukuthi i-7 inenhlanhla - ukusetshenziswa komuntu siqu kwe-cannabis. Lokhu kudlulela ngalé kokukhula kwasekhaya - kuya ekubandlululweni, ekujezisweni ngokusetshenziswa okungavunyelwe noma okungagunyaziwe, isibopho somqashi, nezinhloso zenqubomgomo
Isigaba 15: Ukunikeza izinhlangano izinhlangano - Abokuqala bazoba ngabezokwelapha futhi baxhase izinhlelo zezinto zokusebenza.
Hhayi ukuqamba amanga lesi isigaba esikhulu siqala ekhasini lama-63 - liphela ekhasini 162 - amakhasi angama-100 kuma-dispensaries - 75 ngoMeyi 2020 - no-110 ekupheleni kuka-2021
Isigaba 20 - izikhungo zokulima, obambeke ngenxa yokulima insangu yezokwelapha ekhona, ungafinyelela kwangama-30 ngoJulayi 2021. - Okwamanje kunamalayisense angama-20 wokulima kuphela
Isigaba 25 - Uhlelo lwamaphoyisa lomshayeli wekolishi i-cannabis -Iza unyaka wesikole ka-2021-22. Umsebenzi weSitifiketi seCannabis
Isigaba 30 - Abatshali Bokuqamba - lapho isenzo sangempela sabalimi bamabhizinisi amancane singu-40 kuJulayi 1, 2020. Ayikho i-M&A kuze kube nguDisemba 21, 2021 - kubukeka sengathi kunesikhathi sokulungela i-M&A wave ngo-2022 e-cannabis. Kuzoboshwa omunye umsebenzi wezikebhe ezingama-60 owenzelwe umfana onguKhisimusi ka-2021 Kubukeka sengathi unyaka ka-2022 uzoba unyaka we-cannabis e-Illinois. Ngemuva kwalesosikhathi, isibalo singakhuphuka, kepha singadluleli ngaphezulu kwe-150. Lesi esinye isigaba somthetho esizobe sihlanganisa leli hlobo - kepha nikeza ukunaka kwakho esigatshaneni (n) ekhasini 219.
Izinhlangano 35 zabashokobezi - kusuka ekubuyekezweni kwami ​​lokhu kubonakala kufana nelayisense labasebenza. Uma wenza "ukumnika" - "ilayisense yokuprosesa" ivela kuphela i-2x emthethweni futhi nansi ingcebiso. Inhlangano ephula umthetho ithola ilayisense yokuqhuba. Kodwa-ke, kuvela ukuthi kukhona umehluko phakathi kokucutshungulwa ukuze kukhishwe, futhi kufakwe kokunye okufaka kwenye into efana ne-edibles.
Isigaba 40 Izinhlangano zokuhamba - Into encane ngezindleko zalokhu - wonke la malayisense afuna ukuba nazo zonke izinhlelo zebhizinisi lakho kanye nemibhalo yezezinkampani - njengezinqubomgomo zezokuphepha, izinqubomgomo zamandla, izinqubomgomo nezinhlangano njengamabhizinisi amaningi awenzi. Ngakho-ke lapho abantu bengibuza ukuthi kubiza malini ukuyithola - kahle - kuningi. Udinga uhlelo, futhi kuzoba khona abeluleki abazokuthengisela kona - khumbula ukubabuza ukuthi banomsebenzi wokuphamba enkampanini yakho yini - abanalo
Ukusebenza kwe-Article 45 nokuvikelwa komzimba
Isigaba 50 - Labs nokuhlolwa - masithembe ubumsulwa bensangu yomuthi imane yandiswa
Isigaba 55 - amalungiselelo ajwayelekile - Ukupakisha, izinqubomgomo zokubhubhisa - Izindawo ezivinjelwe ze-cannabis - Ukwenza umthetho - ukuba semthethweni kwezinkontileka, kunganciphisa isu lokuqothuka.
Izindatshana ezingama-60 nezingu-65 izintela - lokho kuyajabulisa futhi sizobe sibhidliza lapho idola lentela liya khona kwishadi likaphayi lizibhalele lona uqobo futhi ngicabanga ukuthi sizolifaka esikhundleni sikaphayi ngokujoyina ishadi lethu.
Isigaba 900 - Izichibiyelo - ukugxuma okukhulu emihlanganweni lapho - futhi isigaba eside kunazo zonke - uyabona, imithetho eminingi kwakudingeka ichitshiyelwe cishe amakhasi angama-300 omthetho ezichibiyelweni
Ekugcineni, Article 999 - miscellaneous - Izinkinga zokuchibiyela nezinto zosuku ezifanele
Ngakho-ke lowo umthetho, kusho ukuthini konke lokho? Bhalisela isiteshi ujoyine iqembu lethu le-facebook kwimithetho yokusebenzisa kwabadala e-Illinois futhi ake siye ku-2022 lapho i-cannabis izokuvuthwa ngokwengeziwe futhi i-M&A izofika kuyo.